Toothpaste Imboni CMC isetshenziswa njengoba ukuqina okufakiwe emuthini wokuxubha ukuvimbela ngokwahlukana okuqinile liquid wokuxubha, okwenza wokuxubha has a viscosity ezithile futhi ukungaguquguquki kanye nokunamathisela abushelelezi futhi emihle, futhi kuthuthukisa ukunambitheka omuthi wokuxubha. Ngo wokuxubha, ezihlukahlukene usawoti electrolyte kuvame wanezela, kanye ukubekezelelana usawoti CMC kungavimbela ngempumelelo electrolyte bungalimazi unama viscosity, ehlambulula futhi eliqinile liquid ngokuhlukana. CMC ine pseudop ezinhle ...
CMC isetshenziswa njengoba ukuqina okufakiwe emuthini wokuxubha ukuvimbela ngokwahlukana okuqinile liquid wokuxubha, okwenza wokuxubha has a viscosity ezithile futhi ukungaguquguquki kanye nokunamathisela abushelelezi futhi emihle, futhi kuthuthukisa ukunambitheka omuthi wokuxubha.
CMC ine pseudoplastic ezinhle ezuzisa ngcono ukukhiqiza omuthi wokuxubha. Kuyinto elula kakhudlwana ukumpintsha uma zisebenzisa.
Uhlobo wokuxubha umkhakha: TM9, TH9, TH10 futhi TVH9
Okulandelayo: Umkhakha weTetimayini